Radio Don Bosco - Fambolena biolojika : miantoka ny ho avin'ny famokarana
Andriamatoa Ranaivoson Fleuris, tantsaha mpamokatra hazo fihinamboa mivohy ny fambolena biolojika eny amin'iny distrika Antananarivo-Atsimondrano. Nahitàny ny hiraka ny fiaraha-miasa tamin'ny tetik'asa fa teo ihany koa ny fihofanana noratoviny. Miainga amin'ny fampiasàna ny zezika biolojika azo avy amin'ny zezika kankana no ahafahana mamokatra.
Ankohatra ny hazo fihinamboa, mamboly legioma ihany koa ingahy Ranaivoson Fleuris, mbola biolojika hatrany ny vokatra. Tombony amin'izany famokarana izany ny lalam-barotra. Be mpitady izany ankehitriny.
Olana nefa ny tsy fahampian'ny rano noho ny fiovaovan'ny toetr'andro hany ka mihady lavaka ny tantsaha ahazoana ny rano ahafahana manondraka. Tery ihany koa ny tany volena ka voafetra ny vokatra miakatra. Olana tokony hikarohana vahaolana hoy ingahy Ranaivoson Fleuris.